Health Sarokar | खोप के हो? यसले कसरी काम गर्छ? किन मानिस डराउँछन्?
बितेको शताब्दीमा खोपले करोडौँ मानिसको ज्यान जोगाएको छ। तर पनि कतिपय देशका स्वास्थ्य विज्ञहरू त्यहाँ खोपप्रति हिच्किचाहटको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताउँछन्।
कसरी सुरु भयो खोप?
दशौँ शताब्दीमा चिनियाँहरूले पहिलो पटक एक प्रकारको खोप पत्ता लगाए। "भ्यारियोलेसन" भनिने प्रक्रियाअन्तर्गत स्वस्थ मानिसहरूलाई रोगले ग्रसित तन्तुको सम्पर्कमा ल्याइन्थ्यो ताकि उनीहरूमा प्रतिरोधी क्षमता जन्मियोस्।
आठ शताब्दीपश्चात् ब्रिटिश चिकित्सक एडवार्ड जेनरले गोठाला महिलाहरूलाई गाईहरूमा लाग्ने सामान्य किसिमको 'काउपक्स' रोग लाग्ने गरेको तर उनीहरूलाई गम्भीर किसिमको स्मलपक्स वा बिफर नलाग्ने गरेकोबारे निकै अध्ययन गरे।
बिफर अत्यन्त सङ्क्रामक रोग थियो जसले एक तिहाइ बिरामीको ज्यानै लिन्थ्यो। बाँचेकाहरू पनि जीवनभरि खत लिएर वा दृष्टिविहीन भएर बाँच्नुपर्थ्यो। सन् १९७६ मा जेनरले एक आठ वर्षीय जेम्स फिप्समाथि परीक्षण गरे।
सन् १९७८ मा उक्त परीक्षणको नतिजा प्रकाशित भयो र भ्याक्सिन (खोप) शब्दको उत्पत्ति भयो। ल्याटिन भाषामा गाईलाई भ्याक्का भनिने गरेकोमा त्यसैबाट भ्याक्सिन शब्द सुरु भयो।
कस्ता सफलता हासिल भए?
गत शताब्दीमा खोपहरूका कारण थुप्रै रोगले पुर्‍याउने हानि निकै कम भयो। सन् १९६८ मा त्यसको खोप विकास नहुन्जेल वार्षिक करिब २६ लाख मानिस दादुराका कारण मर्ने गर्थे।
केही दशकअघि मात्र पनि दशौँ लाखलाई सताएको पोलियोको सङ्क्रमणले प्यारालाइसिस वा मृत्युलाई निकै वास्तविक चिन्ता बनाइदिएको थियो। तर अहिले पोलियो लगभग निर्मूल भएको छ।
किन केही मानिस खोप अस्वीकार गर्छन्?
पछिल्लो समयमा खोपविरोधी आन्दोलनका एक मुख्य अभियानकर्मी एन्ड्र्यु वेकफिल्ड रहे। सन् १९९८ मा ती लन्डनस्थित चिकित्सकले एमएमआर खोप र अटिज्मबीच सम्बन्ध रहेको गलत विवरण प्रकाशन गरे।
एमएमआर भनेको दादुरा, हाँडे तथा रुबेला रोगका लागि साना बालबालिकालाई दिइने खोप हो।उनको विवरणलाई गलत ठहर्‍याइएको छ र वेकफिल्डलाई ब्रिटेनको मेडिकल रजिस्टरबाट पनि हटाइएको थियो। तर पनि उनको दाबीपश्चात् ब्रिटेनमा एमएमआर खोप प्रयोगमा कमी आयो।
साथै खोपको विषयमा निकै राजनीतिकरण भयो। इटलीका आन्तरिक मामिलामन्त्री माट्टियो साल्भिनी खोपविरोधी समूहका पक्षधर छन्।
के छन् खोपका खतरा?
जब जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले खोप प्रयोग गर्छ तब त्यसले रोग फैलन रोकिदिन्छ र प्रतिरोधी क्षमता नभएका वा खोप नलगाएकाहरूलाई समेत जोगाउँछ। यसलाई समुदायगत सुरक्षाकवच वा हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। तर जब यसो हुन पाउँदैन तब पूरै जनसङ्ख्या खतरामा पर्छ।
गत वर्ष अमेरिकाको ब्रुकलिनमा कट्टर यहुदी समुदायले खोप तथा अटिज्मबीच सम्बन्ध रहेको गलत जानकारीसहितका पर्चा बाँडे।
सोही समुदाय अहिले अमेरिकामा दशकौँयता फैलिएको सबैभन्दा ठूलो दादुराको प्रकोपको केन्द्रमा छ।
ती देशको उदाहरणमा अफगानिस्तान, एंगोला तथा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो पर्छन्।तर विकसित मुलुकहरूको हकमा घट्दै गएको गम्भीरतालाई डब्लुएचओले प्रमुख समस्या मानेको छ, अर्थात् मानिसहरूले ती रोगले कति हानि गर्न सक्छन् भन्ने बिर्सन थालेका छन्। बीबीसी